MIYUU SUURTOGAL AH IN LA SIIYO HAMSTER A SORREL: CALEENTA LOO OGGOL YAHAY IN LA JILCIYO, WAXA LA SAMEEYO HADDII UU XAYAWAAN CUNO WARSHAD, CAWSKA KALE EE KU HABOON CUNTADA? - BEER CAGAARAN
Ma loo oggol yahay in ay ku quudiyaan hamsters leh sorrel? Waa maxay cawska la siin karaa jiirka?
Milkiilayaasha masuulka ah waxay si taxadar leh u ilaaliyaan xaamilo. Iyada oo ay soo ifbaxday xagaaga qorraxda, waxaad dooneysaa inaad xayawaankaaga ku daawato wax dhadhan fiican leh, iyo dhalid caleenta casri ah oo leh muuqaalkooda oo dhan waxaana lagu waydiiyaa cuntokiisa.
Si kastaba ha ahaatee, waa mid aad u muhiim ah in la ogaado nooca alaabta ay noqon doonto waxtar u leh xayawaanka, taas oo u horseedi karta dhibaatada caafimaadkiisa.
Ma loo oggol yahay in ay ku quudiyaan hamsters leh sorrel? Waa maxay cawska la siin karaa jiirka? Maqaalkani wuxuu kuu sheegi doonaa si faahfaahsan.
Miyuu suurtagal yahay in la cuno hamsters leh caleemaha cawska?
Xasuuso qawaankani waa mid aad u fudud. Mid ayaa keliya oo xasuusta sida ay u dhadhan tahay dhadhanka sorrel, oo isla markiiba yimaado fahamka sababta aysan jirin wax quudin karo caleemaha hamida geedka this. Oxalic acid iyo casiirkeedu wuxuu noqon karaa sun. Qaar ka mid ah cusbada ayaa awood u leh inay ku degaan lafaha kalyaha ee qaabka sand ama dhagax. Iyo sababta oo ah content-ka sareeya ee sulfel, waxay sababi kartaa dhibaatooyin daran oo leh xuubka caloosha ee xayawaanka.
Maxaa dhici doona markaad isticmaasho dhirta?
Jidhka hamsters ayaa aad u nugul saameynta sunta sunta. Iyada oo tiro badan oo caleemo la cunay, falcelinta ayaa si dhakhso ah u kobcin karta. Laakiin inta badan cilladda maskaxda caloosha ayaa si tartiib ah u muuqata.
Saameynta waxaa ku jiri kara:
Maxaa la sameeyaa haddii hamstar cuno cagaarka?
Haddii ay wali dhacdo in xayawaanku cuno sorrel, baahi degdeg ah oo lala xiriiri karo rugta caafimaadka xoolaha si loogu caawiyo. Ma jiro wax is-daaweyn ah! Habka khaldan ee lagu dooranayo koorso daawo ayaa sababi karta dhibaatooyin ama xitaa geerida xayawaanka.
Waa maxay cawska kale ee aan quudin karin?
Liiska mamnuucidda quudinta cawska cagaarka ah kuma koobna sorrel. Waa kuwan liiska gaaban ee dhirta oo aan sidoo kale la siin karin hamsters si kasta:
Waa in la xusuusto in qofka sooma geedka geedka, walxaha waxyeellada badani ku urursan yihiin. Xayawaanka waa in aan lagu siin wax caws ah oo ku koray deegaan magaaleed ama jidadka ku dhow.
Maxaa la oggol yahay?
Waxaa jira geedo yaryar oo dhadhamiya oo ay ku habboon yihiin daaweynta, haddii la ururiyo si waafaqsan shuruucda kor ku xusan. Waxaa ka mid ah:
Marka aad diyaarinayso cuntada qoyan, waxaad u baahan tahay inaad taxadar badan yeelatid.. Isticmaalka xayawaanka aan loo baahneyn ee alaabtan ayaa si weyn u saameeya caafimaadkiisa. Calaamadaha ugu horreeya ee cunno xumida, baahi deg deg ah oo lala xiriiro takhasusle.